Tho Silica mqengqeleki, China mqengqeleki yodongwe, Kamroller, tho Silica Products - Kamroller
Okunye • Umngundo yodongwe kunye Product
Glass Tempering roller
EZINYE IKUBUMBE bokusebenzisa AND PRODUCT
Kamroller Glass Annealing mqengqeleki
Ukuphucula umgangatho kunye nokunciphisa iindleko Ngokunciphisa ngokubonakalayo ekufumbekeni sulfate, kunokwenzeka ukuphumeza ukuphucuka komgangatho glasi kunye nokwehla kwezinga ezilahliweyo xa kuthelekiswa isondo ngentsimbi. Le dust edlala edidekile ine conductivity thermal ephantsi kakhulu kwaye ukhetho kakhulu ekulawuleni inkqubo annealing, ukwenza iglasi ephantsi-deformation ngaphandle microcracks kunye ntshikilelo ophantsi okanye iglasi eVancouver. · Umphezulu Smooth, Kulula ukunyanga tin okanye tin oxide The fu ...
Silicon steel annealing bottom mqengqeleki
Isetyenziswa kwimveliso sheet lesilicon steel kwizinga eliphezulu izileyi annealing Silicon steel zilungele ukusetyenziswa xa befuna iinkqubo annealing ezifana kokwenziwa kwesinyithi. Isetyenziswa ukwenza umsebenzi annealing oxwebhu lesilicon sentsimbi lobushushu eliphezulu, kwaye uluhlu Amazinga 600-950 ° C. Le theyibhile mqengqeleki iyilelwe ukuze ihlangabezane neemfuno inkqubo kwaye ukusetyenziswa kudibaniso nge kwegunya elilodwa lomenzi ekupheleni shaft iteknoloji Kamroller kaThixo, ukuqinisekisa ukunikezelwa kakuhle kwaye unokuxelwa kwangaphambil. Kwaye ke r komhlaba ...
Tho mqengqeleki Silica for lwaka anneal ...
Kushishino lweemoto, Kamroller inika uluhlu olubanzi macandelo nocoselelo kunye nemveliso. Ngenxa amandla aphezulu zomatshini kunye obizwa ezibalaseleyo kunye neempawu lombane iiseramikhi, abenzi izithuthi kunye namalungu auto nabenzi baya usebenzisa izinto yodongwe endaweni zesinyithi. Sisebenzisana nabathengi bethu ukuphuhlisa amacandelo iindleko enokuthenjwa, ixesha elide yaye ephantsi. Siya kubonelela nosaziwayo ngenxa ukutshayela yamaziko kunye lwaka, ukuvelisa ayisindi lwaka t ...
.K dust tho
Automotive yokugoba yakheka usibumba
KAMROLLER FLAT Arch IMVELISO
Glass Tempering roller Series
Purity High tho Silica Raw Material
KAMROLLER® i phambili umenzi yehlabathi iseramikhi ophezulu zobugcisa ukususela 1988 EUnited States China, imizi-mveliso kunye namaziko nokunika iimveliso ezisemgangathweni iinkonzo kubathengi ehlabathini jikelele.
Shanghai Road, Xinyi loQoqosho - Technological Development Zone, Xuzhou City, Jiangsu kwiPhondo, China
Ukuba unemibuzo malunga iimveliso zethu okanye pricelist, nceda ushiye imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba kwebala zingadlulanga iiyure eziyi-24